DHIR DAAWEEDKA LO'DA: DAAQSINKA, XOOLAHA, CIMRI DHEER - XOOLAHA
Waa maxay cawska cuna cuno
Cuntada Cagaaran waa ilaha ugu muhiimsan ee fiitamiinada iyo macdanta xayawaanka xilliga kuleylka, marka xooluhu u dhaqmaan daaqsinka.
Dhammaan noocyada dhirta la cuni karo ee ku koraya cagaarka si sahlan ayaa u dheefshiikara, iskuna bedelaan jirka, marka laga reebo waa la goostay, tusaale ahaan, qaabka cagaarka, si guul leh loogu isticmaalo cuntada jiilaalka ee lo'da.
Cawska cawsku wuxuu cunaa daaqa
Dhammaan dhirta dhirta daaqsinka ah waxay u qaybsan yihiin 4 kooxood:
badarka (qoyska badarka);
sedge (sedge iyo rush);
cagaha (qoysaska kale).
Ma taqaanaa? Dhadhanka caanuhu wuxuu ku xiran yahay cunnooyinka lo'da. Haddii aad dareentid qadhaadh, waxay u badan tahay, inta badan haweenka uurka leh waxay cuneen qadhaadh.
Legumes - koox ka kooban inta badan dhirta dilka ah, wakiiladeeda waxay ku badan yihiin kaymaha iyo cawska daadka. Waxay u eg yihiin lo'da marka loo barbar dhigo firileyda oo wakhti dheer oo baraf ah (2 jeer). 85-86% tirada guud ee dhirta ayaa si fiican u nuugay xoolaha, 8-9% waa mid aan ku habboonayn lo'da, iyo 5% oo gebi ahaanba sumad u ah.
Wakiilada ugu caansan ee caanaha:
noocyada kala duwan ee dhirta;
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato waxa cunto ah ee lo'da caano waa inay noqdaan, lo'da qalalan uurka leh, sida loo quudiyo lo'da xilliga qaboobaha.
Badarka - dadka deggan dhulka aaga, kaymaha, daadadka webiyada iyo harooyinka. 90% dhirta laga helay wadarta guud ee jirka ayaa si fiican u nuugay jirka, 5% waxaa loo arkaa inay liidato, 5% waa sun. Dalaggu ka yar yahay nafaqada.
Waxay udubdhexaad u yihiin kooxo:
Hygrophiles - kuwa ku kora jidhka biyaha ama meel u dhow iyaga oo si dhaqso ah u noqdaan kuwo adag. Waxay ka mid yihiin cawska, cawska, maniyaanka, bariiska badnaanta iyo arkophila.
Xerofiles - deganayaasha aagga taleexa, dhul-dabiiciga ah. Waxay u adkeysanayaan abaarta. Dhirta Kuwani waa fedcue, fescue, cawska baal, tiostrenitsa, timaha iyo wixii la mid ah.
Mesophilic - dadka jecel qoyaanka celceliska waxay ka yimaadaan kaymaha iyo buuraha. Guga, horumarintooda ayaa si tartiib ah u dhicin. Kuwaas waxaa ka mid ah wheatgrass, bood, foxtail, shiil, ryegrass, iwm.
Guryo cusbo ah waxay ku nool yihiin carrada cusbada leh ee steppes, lamadegyada iyo lamadegaanka semi-ah. Ka dib marka uu dhasho, dhirta ayaa si firfircoon u horumarisa. Wakiilo ka mid ah kooxdani waa beskilnitsa, mulberry, riparian.
Dhirta miraha sannadka - dadka dega lamadegaanka iyo lamadegaannada semi-jimicsiga. Kuwaas waxaa ka mid ah dab, muraayad, feero, miro, masago, iwm.
Sedge - geedo badan oo qoyan oo qoyan. Caleenta dhirta waa mid aad u adag, sidaa daraadeed ma ahan kuwa caan ah.
Ma taqaanaa? Cunto hilibka lo'da ee qaar ka mid ah dawladaha Hindida waxaa jira ganaax weyn oo lacag ah, iyo haddii ay dhacdo in lagu celiyo mamnuucaadda - xabsi ilaa shan sano ah.
Xubnaha qoyska waxaa loo qaybiyaa kooxo kala duwan:
qoyaan-qoyan (oo leh caleemo aan qalafsanayn): sida seddexda xeebeed ama soodhada;
qoyaan-jecel cuno: safka labaad, biyaha, sedge solar;
si fiican u cunay xagasha, baraf-yar-yar, buur (horay, barar, barooranimo iyo sedjiro kale).
Dhir daaweedyada waxaa ka mid ah dhir kala duwan oo ka badan 1000 qoys oo kala duwan. Waxay u badan yihiin ku koraan kaymaha, buuraha, marar dhif ah - marxaladaha iyo lamadegaanka. 52% dhammaan dhirta kooxda ayaa si fiican loo cunaa, 39% ayaa si liidata loo cunaa, 9% waa sunta lo'da.
Wakiilada ugu badan waa:
Waa maxay cawska cawska loo beerin karaa in lo'da?
Waxaad kaloo abuuri kartaa daaq yar oo guriga ah - ku beeri xayawaanka ku socda xayawaanka cawska. Suuqa beerka waxaa ka muuqda noocyo badan oo kala duwan oo dhirta, sanadka iyo inta badan.
Cuntooyinka sanadlaha ah ee ugu caansan waa:
Ryegrass - baadiyaha qoyan ee qoyan oo leh jilic jilicsan, waxay gaartaa dherer 1 m. Waxay leedahay caleemo cagaaran oo iftiin leh iyo geedo huruud ah. Burburka waa baraf u adkaysta oo adkaysi u ah cudurrada iyo weerarada cayayaanka.
Cawska Suudaan, waxaa loola jeedaa siiriyaalka. Bushku wuxuu koraa illaa 0.5-3 m oo dherer ah. Caleemaha lanceolate waxay leeyihiin muuqaal cad iyo midab cagaaran. Cawska waa abaar u adkaysta, oo leh heer aad u sarreeya oo dhib ah (waxaa la geyn karaa dhowr jeer inta lagu jiro sanadka).
Cadaan cadWaxay ku koraan ilaa 0.25-1 m dherer ahaan. Gunteeda, sida caadiga ah, ayaa lagu daboolaa timo adag, xaalado dhif ah ayaa si buuxda u dhali kara. Caleemaha hoose ee lyre-qaabeeya, sare ee - qaab ah oval ballaaran. Inta lagu jiro ubax on dhirta ubaxyada cad ama ubaxyo huruud ah. Waa hagaagsan yahay cayayaanka.
Phacelia - Warshadani waa warshad malab, waxa uu leeyahay stem suuf ah oo qumman, kaas oo koraya 0.6-0.9 m dhererka. Wakhtiga ubaxu wuxuu yimaadaa bil kadib beeridda wuxuuna soconayaa 1-2 bilood.
Vika Spring - Cawsku wuxuu ku badan yahay borotiinka. Wuxuu gaarsiisaa 1 m dhererka wuxuuna leeyahay baalalaad. Geedka ayaa ficilka ku faafaya dhulka.
Dhirta cawska ayaa sidoo kale waxay dalbanayaan beeralayda, maadaama aysan jirin baahi loo qabo in lagu beero geedo sannadle ah.
Kuwa ugu caansan waa:
Alfalfa - Qaadi duurka dherer dhexdhexaad ah. Caleemaha cagaaran waxay leeyihiin qaab ellipsoidal ah. Inta lagu jiro ubax, dhirta waxaa lagu daboolay ubaxyo buluug-guduud ah (noocyo kaladuwan ayaa suurta gal ah, ilaa kareemaha). Cawska qoyan ee adag ee jiilaalka sare iyo iska caabbinta abaarta, si fudud u habaynaya xaaladaha cimilada cusub.
Cagaarka cad - wakiil ka mid ah qoyska legume leh caleemaha aasaasida caleemaha. Iyadoo aan qabin xaaladaha beerashada, si fiican loo horumariyay, xitaa carrada dhoobada ah iyo carrada. Waxay leedahay waqti dheer ubax, taas oo inta badan loo isticmaalo sida qurxinta.
Sandy Esparcetiyada oo nidaamka xidid qoto dheer. Caws cagaaran ayaa gaadhaya 0.8m dherer ahaan. Qeybta sare ee caleen waxay leedahay midabka cagaaran iyo dusha sare ee dharka, qaybta hoose waa midda loo yaqaan 'pubescent'. Miraha - digirta.
Cawska cawska cagaaran waxay sameeyaan cawska cufan ee cufan ee midabka cagaaran inta lagu jiro xilliga oo dhan ubax. Caleemaha waa caleen, gaari dhererkeedu yahay 0.7m.
Maxaa laga samayn karaa cawska
Beeralayda khibrada leh waxay inta badan soo saartaa cawska cawska ah xilliga qaboobaha qaabka:
Haylage - dhirta la qalajiyey ilaa 55% qoyaan. Iyada oo heerka qoyaanka, qiyaastii dhammaan bakteeriyadu waxay yareeyaan noloshooda. Wixii daawooyin ah waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo dhuxul iyo caleemaha cagaaran (alfalfa, dhirbirka, sainfoin), kaas oo xuubka hore ee horumarka.
Waa muhiim! Heerka qoyaanka waxaa lala socdaa isticmaalka qoyaanka qoyaanka.
Cabbirka oo dhan ayaa lagu jajabiyaa dhererka lagu taliyey ee 3 cm.
Hay waxaa loola jeedaa quudin aan caadi ahayn. Heerka qoyaanka ee dhirta ku jira waa in aanay noqon wax ka badan 17%. Dhirta ayaa la isku qabsadey oo waxay u baxeen inay qallaan qorraxda, iyaga oo marmar ku adkeynaya qadhaadh. Marka xigta, duubka waxaa lagu soo ururiyaa tuubooyin ama lagu cadaadiyay qalabka beeraha oo lagu meeleeyo kaydinta muddada fog ee qol qallalan.
Straw waa caleemaha qallalan ee dhirta (miraha iyo badarka) kuwaas oo sii haray ka dib. Waa in ay lahaato heer qoyaan ah 20% si looga fogaado wax caam ah.
Waxaa jira dhawr fursadood oo soo iibsiga:
gooynta, qalajinta, dhagxaanta iyo gaadiidka loo geeyo goobta kaydinta;
gooynaya, qalajinta, uruurinta dabka iyo u guurida kaydinta dheeraadka ah;
gawaarida, ku xoqidda qalabka gaarka ah ee loo yaqaan "bales" iyo u dhaqaaqida meesha qalajinta.
Silo waa dhir daawo oo lagu daaweeyay bakteeriyada lactic acid. Dhirta qoyaan leh qiyaasta qiyaasta 60% ayaa lagu meeleeyaa godad gaar ah. Waxaa jira xididada iyo khudaarta kala duwan, iyo sidoo kale qallalan.
Mass waa la cadaadiyay waxaana lagu daboolay filim si loo yareeyo helitaanka hawada. Ka dib 30-40 maalmood silage waa diyaar, waxa uu leeyahay dalool huruud ah iyo caraf udgoon. Raashinka ku kaydi silo.
Sunta cawska cows
Dhulka daaqa, geedo yaryar oo khatar u ah xayawaanka ayaa badanaa kori kara:
Ledum rosemary - Dhiig karkarin jilbaha jilicsan. Waxay gaadheysaa heerkul ah 0.2-1.25 m, wuxuu leeyahay caraf xoog leh. Caleemaha ma ahan kuwo duurjoog ah, caleemaha waa qaab muuqaal ah, ubaxa waa caddaan midabka. Waxay curyaani kartaa habka dhexe ee dareenka, mareenka caloosha, wadnaha, xayawaanka ayaa joojiya inay dareemaan addimada.
Warty euonymus - Buqshad qulqulaya 1-2 m sare, laamihiisu waa dhuuban yihiin, daboolay madow "burooyinka". Caleemaha waxay leeyihiin qaab muuqaal iyo midab cagaaran, inta lagu jiro ubax dhirta waxaa lagu daboolay ubax yar. Qadar yar ayaa keena saxarada caloosha iyo dabacsan, dhimasho qiyaas badan.
Daadi madow - Warshad reer Solanaceae ah oo leh caraf udgoon. Waxay leedahay ubaxyo jaale ah oo waaweyn oo leh dhar guduudan. Wuxuu keenaa rabshad, gariir iyo tymontitis.
Hemlock qashin - warshad laba mitir leh oo leh miraha wareegsan ee midab madow. Markaad xoqayso midhaha, waad u urin kartaa jiirka. In lo'da, sababa daciifnimo, waxay curyaani kartaa habka dhexe ee dareenka. Xayawaanka ayaa inta badan u dhintaan cawska.
Dhibaatada sumowga wuxuu koraa ilaa 2 m dhererka. Waxay leedahay ubax yar oo cad, oo lagu ururiyey dalladaha. Waxay kicisaa quudinta, curyaanka neefsashada.
Anterone Buttercup Anemone wuxuu leeyahay caleemo qulqulaya oo dheer iyo caleemo caleemo oo kale ah, oo ku daboolan hoose oo guduud ah. Cirridku waxay gaartaa 0.1-0.3 m dhererka, ubaxa waa huruud. Waxay xanuujisaa kelyaha iyo mareenka caloosha iyo mindhicirka, waxay keenaan kaadida iyo dhiigbaxa kaadida.
Cunto malax leh - Caws dheer oo leh ur aan fiicnayn. Ubaxyada xajmiga weyn ee midab cad waxay leeyihiin qaab dawan ah. Waxay carqaladeeysaa waxqabadka wadnaha iyo maskaxda, waxa sababa curyaan.
Hypericum - Warshad qumman leh oo leh dherer ah 0.8m oo leh dhuuban. Waxaa la jajabiyey ubaxyo dahab ah oo lagu daboolay dhibco madow. Waxay xanuujisaa muuqaalka burooyinka, bararka carrabka iyo dibnaha.
Buttercups - geedo leh juus ah sunta. Heerka ugu sarreeya ee dhirta waa 1 m. Ubaxaha waxaa lagu dhajiyaa lugaha dheer waxayna leeyihiin jaale hurdi ah, waxay ka kooban yihiin 5 xayawaan, oo aan ka badneyn 2 cm dhexdhexaad ah, waxay sababaan in ay carqaladeeyaan oo ay carqaladeeyaan kursiga.
Afkaagu xoogan yahay Waxay leedahay qaab xariif ah oo leh dhudhun adag iyo dhererka ugu dheer ee 3 m. Qaabka caleemaha wuxuu ku dhow yahay saddex-gees, ubaxu waxay ku ururaan dalladaha. Waxay curyaan u tahay shaqada habdhiska dhexe ee wadnaha iyo wadnaha, taasoo keenaysa matag iyo saxaro dabacsan.
Waa muhiim! Si taxadar leh u dooro meel loogu talagalay lo'da daaqa, cagaaran waa inaanay noqon sidii dhirta waxyeellada leh, iyo wasakheynta warshadaha.
Daaqsinta xilliga gu'ga-xagaaga waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeellidda xoolaha, cawskana waa la abuuri karaa iyada oo aan la helin meel u dhow ama mid aan habboonayn. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la xasuusto in ay jiraan dhir ay ku sumoobaan si lo'da, iyo isticmaalka dhirtu waxay xitaa horseedi kartaa geerida xoolaha.